Soo dejisan MODO 13.21 – Vessoft
WindowsSawireynta iyo qaabeyntaCAD & 3D-qaabayntaMODO
Bogga rasmiga ah: MODO
Lasheekeestaa – software ah si ay u abuuraan iyo edit content ee digital oo taageero badan oo qaabab image ah. software waxay leedahay engine awood haya’ad kaas oo bixiya image ugu macquul ah. Lasheekeestaa waa awoodaa inuu Abuuro wax characters 3D adag, walxaha naqshadda iyo goobaha kale aamusnaan ah. software ka kooban set badan oo barbaro qalabka iyo tas-hiilaadka habyaalada diyaar. Lasheekeestaa sidoo kale u saamaxaaya in ay abuuraan qalab gaar ah adiga kuu gaar ah baahidaada.
Tilmaamo la dheereeyey ee lagula socdo, haya’ad iyo animation
technology Advanced of processing
set badan oo qalab ah noocyada kala duwan
Jiritaanka habyaalada diyaar iyo tusaalooyin texture
Soo dejisan MODO
Faallo ku saabsan MODO
MODO Xirfadaha la xiriira